Tilmaamaha Socdaalka ee Tokyo Olympics Halal - Tilmaamaha Safarka Muslimiinta Tokyo
Taariikh: Wed 6 Dhul Qidah 1442AH 16-6-2021AD By Irwan Shah Categories: Japan Tags: Caasimadaha Dunida, Bariga Aasiya No comments
Tokyo waa caasimada Japan waana mid ka mid ah 47-da maamul goboleed. Waxay caan ku tahay inay tahay meesha ugu weyn magaalooyinka adduunka. Qoyska Boqortooyada Jaban ayaa sidoo kale halkan ku nool taas oo kaliya muujineysa sida Tokyo muhiim u tahay. Tokyo waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah seddexda waa weyn ee dhaqaalaha adduunka, oo leh London iyo New York City. biyaha.
Cusboonaysiintii ugu dambeysay: Sebtember 22, 2021 3:45 PM +08
Meelaha ku hareeraysan ayaa ah mid fidsan. Waxay ku taal jasiiradda Honshu magaciina waxaa loo beddelay Tokyo bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad maxaa yeelay eraygan wuxuu u taagan yahay 'caasimadda'. Maalmahan in kastoo, Tokyo waxay u badan tahay inay caan ku tahay dadkeeda cufan, meel walbana waxay umuuqataa mid aad u camiran.
Tokyo (Tokyo ŌDayaanna ō) waa caasimada weyn ee hodanka ah Japan, iyo sidoo kale magaaladeeda ugu weyn, oo ay ku qulqulayaan dhaqan, ganacsi, iyo inta badan oo dhan, dadka. Maaddaama ay tahay magaalada ugu dad badan magaalooyinka adduunka, Tokyo waa magaalo soo jiidasho leh oo firfircoon oo isku dhafan saameynta shisheeye, dhaqanka macaamiisha iyo ganacsiga adduunka oo ay weheliyaan haraadiga caasimadda hore Japan. Laga soo bilaabo elektaroniga casriga ah iyo dhismayaasha dhaadheer ee dhalaalaya ilaa ubaxyada cherry iyo Imper
Qaab dhismeedka halkan waa badiyaa mid casri ah maxaa yeelay badankood waxaa lagu burburiyey dhulgariirkii 1923, ama qaraxii dabka ee dagaalkii labaad ee aduunka. Si kastaba ha noqotee, tani kama dhimeyso maxaa yeelay qaab dhismeedka casriga ahi wuxuu ka dhigayaa meesha mid aad u waasac badan sida dhabta ah.
Tokyo waxay ku raaxeysataa xagaaga kulul iyo qoyan iyo jiilaalka khafiifka ah. Waxaa jira wakhtiyo qabow laakiin midkoodna aad uma qabow. Ogosto waa bisha ugu diiran heerkulka celcelis ahaan celcelis ahaan 27C. Waqtiga ugu wanaagsan ee booqashada waa bisha Janaayo halkaas oo heer kulka uu hoos ugu dhici karo 6C. Roobku wuxuu u muuqdaa inuu ka badnaan doono xagaaga marka loo eego xilliga qaboobaha barafuna wuu dhici doonaa hadda iyo ka dib xilliga qaboobaha. Duufaannada sidoo kale way dhacaan, laakiin kuwani badanaa kuma xoog badna inay dhibaatooyin keenaan.
Waxaa jira shabakad ballaaran oo tareenno, tareennada dhulka hoostiisa mara iyo basas u adeega Tokyo. Waa tareenka iyo tareennada dhulka hoostiisa mara oo ah habka ugu wanaagsan ee magaalada loogu dhex wareegi karo.
In kasta oo tikidhada qaaska ahi aysan lahayn qiimo dhimis sidan oo kale ah, iyaga oo iibsanaya, qofka socotada ahi dhaqso ayuu u socon karaa.
Waxaa jira dalabyo kaladuwan ee kafiiri kuwaan. Tani sidoo kale waa guriga tareenka caanka ah ee caanka ah, shinkansen, kaasoo dadka ka qaada Tokyo ilaa Osaka saddex saacadood oo keliya.
Kirada baabuurtu waa suurtagal laakiin ciriiriga jira awgeed, way fiicnaan kartaa inaad tagsi qaadato, ama aad qaadatid gaadiidka dadweynaha oo nadiif ahaan iyo ammaan ahaanba waxtar leh.
Markay imaanayaan Tokyo, booqdayaal badan waxay ogaadaan inay qaadato maalmo si ay saacadda jidhkoodu u wada shaqeeyaan. Markay taasi dhacdo, booqashada ugu horreysa waa inay noqotaa suuqa kalluunka ugu mashquulka badan adduunka. Boos celinta si aad u booqato, iskuday inaad raadiso xarunta macluumaadka kalluunka ee Kachidoki Gate ee Wadada Harumi. Soo-booqdeyaasha waxaa loo oggol yahay oo keliya maalmaha qaarkood iyo laba koox oo lixdan ah. Waxa oo dhami waxay bilaabmayaan ugu yaraan shanta subaxnimo sidaa darteed waxay si fiican ula jaan qaadayaan dadka caajiska yar! Waqti ku jir si aad ula kulanto xaraashka kalluunka tuunada ee nool. Taas ka dib, u tag quraacda sushi ee Tsukiji. In kasta oo kalluunka ceeriin ee quraacda loogu talagalay oo keliya geesinimada, haddana waxaa habboon in la isku dayo ugu yaraan. Waxaa jira dukaamo badan oo kala duwan oo iibiya sushi, laakiin kuwa ugu fiican ayaa ka baxsan suuqa miraha iyo khudradda jumlada ah. Raadi khadad dhaadheer si aad u hesho dukaamada sushi ee ugu fiican agagaaraha.
Waxa kale oo jira suuq guud oo ku yaal Tsukiji oo ah cuntooyin qaas ah oo la bixiyo, laakiin iibsashada ugu fiican waa mindiyo sashimi ah iyo fijaanno.
Qofna ma booqan karo Tokyo isagoon markhaati ka noqonin tartanka lagdinta sumoo ee meel walba ka dhaca. Ciyaartooydan waa weyn ayaa lagu xushmeeyaa xirfadahooda, midkoodna kama maqnaado koox kooxeedkooda guud. Waxaa jira seddex tartan oo waa weyn sanadka oo dhan mid walbana wuxuu soconayaa shan iyo toban maalmood. Waxay dhacaan Janaayo, May iyo September. Tilmaanta halkan waa in la booqdo subaxdii ama kal-fadhiyada maadaama ay yar yihiin markaa. Haddii aad booqanaysid meel ka baxsan xilliyada tartanka, iskuday inaad ku booqato fadhiyada tababarka goob sumo deggan, sida loogu yeero.
Booqasho Japan lama dhammaystiri karo iyada oo aan la booqan mowlaca mid ka mid ah mowlacyada caanka ah ee halkan ku yaal waa Shinto macbudka. Jawiga goobta waa deganaan, marka runti maahan dabin dalxiis. Waxaa jira afartan cagood oo sare, torii, oo ku yaal furitaanka beerta nasashada, waxaana jira laba boqol oo hektar oo lagu dhex wareego. Raadi durbaanka weyn ee taiko si aad u bixiso waxoogaa qurbaan ah oo aad ku tukato halkan. Madaxa foorari laba jeer, sacabbo hal jeer ka dibna mar labaad sujuud. Axadaha, xafladaha xafladaha aroosyada badan ayaa halkan lagu soo bandhigaa iyadoo wadaaddada Shinto ay goobjoog yihiin. Waa aragti la yaab leh in la arko oo, haddii nasiibku yeesho, in ka badan hal socod ayaa dhici doona maanta.
Beerta Yoyogi ee ku taal Shibuya-ku waxay mudan tahay booqashada. Markaad waxoogaa aamusnaan ah ku qaadatay macbudka, meeshani waa wax yar oo aan yarayn karin. Maaddaama boosku uu yahay mid qiimo leh, fanaaniin badan ayaa halkan u yimaada inay ku tababaraan. Tani waxay noqon kartaa wax kasta oo laga soo bilaabo orod loo maro riwaayad ilaa heesaha hip hop iyo qoob ka ciyaarka. Dhaqanka pop-ka Mareykanka ee kontomeeyadii waa mid aad loo jecel yahay, markaa ka filo inaad halkaan ku aragto gogosha buskudka iyo timo-shinnida.
Xadiiqadu sidoo kale waa meel fiican oo lagu maro baaskiil waxayna diyaar u yihiin inay kireystaan. Tag aagga waqooyi-galbeed ee bartamaha bartamaha oo iska hubi tandooyinka iyo baaskiiladaha. Cunto fudud ayaa la heli karaa iyada oo ay weheliyaan biir iyo cabitaanno kale oo fudud, markaa meeshani waa meel fiican oo lagu joojiyo qadada.
Kuwa jecel beerta, Shinjuku Gyoen National Garden waa waajib. Waxay ku qurxiyeen meeshan qaabab kala duwan. Waxaa jira muuqaalka muuqaalka Ingiriisiga, Rasmiga ah, Dhaqanka Jabbaan oo leh maqaaxi u gaar ah iwm. Si aad u hesho aragti guud oo wanaagsan, tag dabaqa labaad ee Taiwan Taambuugga oo qaado sawirro xusuus mudan. Haddii ay suurtagal tahay, hiigso waqtiga Febraayo / Maarso si markaa quruxda Cherry Blossoms ay u soo marto.
Wadada bilaashka ah ee lagu arki karo magaalada sida ugufiican waa in la aado Xafiisyada Dowlada ee Magaalada Tokyo. Tani waxay leedahay laba munaaradood oo leh laba dabaq oo korka ah dabaqa shanaad. Raadi munaaradaha galbeedka galbeedka Shinjuku aagga skyscraper. Tani waa hab cajiib ah oo lagu heli karo sawirrada khadadka cirka, oo dalxiisayaal badan ayaa halkaan u yimaada ujeedadan oo keliya.
Waxaa laga yaabaa in kuwa ugu caansan dhammaan goobaha madadaalada ee Tokyo ay yihiin Disneyland. Sida qofku ka filan karo Disney, jardiinada waxaa loo maamulaa sida saacadda oo kale, waxayna leedahay dhammaan astaamaha caanka ah ee carruurtu la falgalaan. Duulimaadyadu waa wax caadi ah, bandhigyada waa kuwo aan caadi ahayn iyo qaabeynta oo qumman. Tigidhada horay ugu sii sii sii dhigto websaydhka si saf looga fogaado. DisneySea sidoo kale waxay ku taal Tokyo, sidaa darteed filo xoogaa xiiso leh oo ku saleysan badda. Nasiib darro, websaydhku maahan mid soo jiidasho leh ama xiiso leh, laakiin kuwa naga mid ah ee Disneyland ku tagay dalal kale ayaa ogaan doona waxa laga filayo.
Banaanka Istaanka Tokyo, irida laga galo Yaesu, waa dukaanka waaxda Daimaru. Dabaqa tobnaad waxaa ku yaal dukaan kimono ah oo dadka deegaanku ku soo noqnoqdaan. Dalxiisayaashu way jecel yihiin meeshan laakiin qiimaha dharkan qurxoon. Wixii xusuus gaar ah oo dheeri ah oo magaalada ah, guriga u kaxee shanlo shanlo, timo kabaal ah ama marawaxado. Isku day khamiis khafiif ah oo hudheelada maxalliga ahi intooda badan ku leeyihiin qolalkooda, yukata, oo ay la socdaan qurxinno qurux badan oo qaab jaangooyooyin joomatari ah loogu talagalay ragga iyo daabacaadda haweenka u samaysan. Seefaha Samurai ee cajiibka ah ayaa lagu soo bandhigayaa meel u dhow sidaa darteed ragga waxay heli doonaan wax ay maskaxdooda ka saaraan dhammaan dukaammadaas!
Waayo-aragnimo dalxiis oo dhab ah, iskuday Orizaza Bazaar ee ku yaal Omotesando Street oo xitaa leh yukata badan oo la soo bandhigo. Meeshani way ka raqiisan tahay tan Daimaru laakiin runti way camiran kartaa dhammaadka usbuuca. Dukaanka ayaa xirmaya Khamiista.
Sushi horey ayaa loo sheegay qof walbana waa inuu siiyaa cunnadan macaan isku day inta uu joogo Tokyo. Maahan qof walba, laakiin halkan waa halka ay sida ugu fiican uga dhigaan.
Cuntada magaalada had iyo jeer ma ahan mid raqiis ah, laakiin kuwa ogaada waxay ku heli karaan miisaaniyad adag. Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la aadayo halka ay dadka maxalliga ahi aadaan inay wax ka cunaan baar ama xaafadaha dhexdooda oo u adeega ninka shaqeeya. Ebisu, oo ku taal Shibuya-ku, waxaa ka buuxa baararka yar yar iyo maqaayadaha qaarkood oo ku takhasusay hilibka duban iyo khudradda la dubay.
Isku day sashimi oo loogu adeegsaday taarikada yar, ka dibna ka dooro menusyada cabbitaanka badan. Raadi menus-ka sabuuradda ka baxsan xarumahan oo aan ka fogayn saldhigga tareennada waaweyn. Gyi miso waa hilib cajaa'ib leh oo maroodiga yamayska ah iyo rooti leh xidid sinjabiil qoto dheer leh. Waxa kale oo jira isku-dhafka cuntada ee reer galbeedka sidoo kale, sida KFC ama Choco-croco sidaa darteed carruurtu uma baahna inay ku silcaan. Buri sidoo kale waa meel wanaagsan oo lagu booqdo, waxayna leedahay liis aad u weyn oo dhowr meelood u jirta.
Soo-booqdayaasha ka socda waddamada reer Galbeedka ayaa la yaabi kara inay ogaadaan in kasta oo ay ku caan baxday sumcaddeeda inay tahay magaalo qaali ah, in wax laga cuno Tokyo ay layaableh la awoodi karto In kasta oo goobaha cuntada wanaagsan ee Tokyo ay noqon karaan kuwa adduunka ugu qaalisan, haddana marka miisaaniyadda la soo gabagabeeyo, waxaa si fudud u fudud in la helo bariis aasaasi ah ama baastada isku-darka ah ee wada cunnada laga bilaabo ¥ 300; qiimo aan la mid ahayn xitaa McDonald's ama silsilado kale oo dhakhso leh oo ku yaal Galbeedka.
Tokyo waxay leedahay tiro iyo raashin badan. Bakhaarada Waaxdu waxay leeyihiin hoolalka cuntada, sida caadiga ah qaybta hoose, oo leh cunto u dhiganta kuwa ugu macaan ee magaalooyinka kale ee adduunka (in kasta oo ay u badan yihiin cunnooyinka ajaanibta ah ee Jabaaniiska ah iyo kuwa Yabaaniiska ah). Qeybaha hoose ee xarumaha tareenka waxay leeyihiin dukaamo waaweyn oo leh tijaabiyayaal dhadhan bilaash ah. Waa hab fiican oo lagu soo qaato qaar ka mid ah cuntooyinka cajiibka ah ee ay bilaash ku leeyihiin. Tokyo waxay leedahay makhaayado tiro badan, markaa eeg midka ugu weyn Japan hage noocyada cuntada aad la kulmi doonto iyo silsilado caan ah. Liistada badiyaa ayaa lagu dhajiyaa banaanka, markaa waad hubin kartaa qiimaha. Dukaamada qaar waxay leeyihiin cuntada balaastigga ah ee caanka ah daaqadaha hore. Ha ka waaban inaad u jiido shaqaalaha sugaya dhinaca hore si aad ugu muujiso waxa aad rabto. Had iyo jeer qaado lacag caddaan ah. Makhaayado badan ayaan aqbali doonin kaararka amaahda.
Tokyo waxay leedahay tobanaan kun oo makhaayado ah oo matalaya cunnooyin badan oo adduunka ah, in kasta oo mararka qaarkood lagu hagaajiyo dhadhanka maxalliga ah, laakiin sidoo kale waxay bixisaa takhasusyo maxalli ah oo gaar ah. Gudaha Japan, Cunnooyinka Tokyo waxaa loogu yaqaanaa 3 suxuun: sushi, tempura, iyo unagi (biyo macaan). Nigirizushi (kalluunka lagu cadaadiyey bariiska), oo adduunka oo dhan looga yaqaan "sushi", dhab ahaantii wuxuu ka yimid Tokyo, iyo gudaha Japan waxaa loo yaqaan sida Edo-mae zushi (Sushi-Edo-style). Midkale ayaa ah monjayaki (も ん じ ゃ 焼 き), gooey, nooca kaabashka laga buuxiyey okonomiyaki taas oo adeegsanaysa dufan aad u khafiif ah si loo gaadho isku dheelitirnaan, caramelized joogta ah. Waxay asal ahaan ka timid aagga Tsukishima ee Chuo maantana waxaa ku yaal maqaaxiyo badan oo u dhow Asakusa oo bixiya monjayaki.
Basbaas kulul Waxaa laga heli karaa daabacado kala duwan, gobol ahaan, agagaarka Tokyo, joornaalkan bilaashka ah wuxuu ku siinayaa hage makhaayadaha maxalliga ah ee Jabbaan laakiin wuxuu ku siiyaa sawirro iyo khariidado makhaayadaha. Makhaayadaha qaarkood xitaa waxay bixiyaan rasiidh. Makhaayadaha ugu badan ee joornaalkan ku dhex yaal ayaa ku jira bartamaha-baaxadda illaa heer dhammaadkeedu sarreeyo.
Nolosha Habeennimo ee Tokyo
Jabaaniyiinta ayaa caan ku ah jaceylka ay u qabaan karaoke, Tokyo iyana kama reeban. Gudaha xaafadda Hiroo, ka hel baarar la yiraahdo Burburin Hits, iyo intaad maqnaato dhowr saacadood oo raaxo leh oo la siinayo dhagaystayaal aad u saf badan. Waxaa jira heeso badan oo Ingiriis ah oo ku jira buugyaraha ballaadhan. Waxaa jira afartan doolar oo lagaa qaadayo si aad u soo gasho laakiin tan waxaa ku jira laba cabitaan. Si aad halkan ugu timaado gaadiid maxalli ah, qaado khadka Hibiya oo ka deg halka laga baxo 2. Halkaas waxaa lagaaga socdaa dhowr daqiiqo oo keliya. Expats waxay la wareegaan habeenada qaar sidaa darteed, haddii tani aysan ahayn waxa loo baahan yahay, iskuday Jan Ken Pon bedelkiisa.
Jan Ken Pon (maqas dhagax weyn waa tarjumaad suugaaneed) waa naadi bixisa muusikada tooska ah oo daboolaya kontonnadii ilaa sideetamaadkii, marka tani waa meel aad u wanaagsan oo hilaadin ah. La soco inkasta oo hoteelada la sheekaysanaya macaamiisha qaybta hore ee fiidkii ay bixiso macaamilku. Kuwa saaran gaadiidka dadweynaha, u kac khadka khadka Metro ee Hibiya ama khadka JR Yamanote illaa Ebisu.
Khibrad kale oo muusig waa inay ahaataa Gigabar-ka Minami-Aoyama oo ah xarunta dhabta ah ee nolosha habeennimo ee Tokyo. Halkan booqdayaashu way ku heesi karaan, ku ciyaari karaan durbaanno ama gitaar ay la socdaan kooxda. Way ku kacaysaa ku biiristu, waxaana jira kharash dabool sidoo kale, laakiin waaya-aragnimadu maaha in la seego.
Xisbigu waligiis kuma istaagayo Tokyo (ugu yaraan baararka karaoke), waxaadna ka heli doontaa baararka yar yar iyo maqaayadaha meel walba.
Habka ugu badan ee Jabaanku u seexdo habeen shaqsi ahaan ama koox yar wuxuu ahaan lahaa godadka waraabinta ee Jabaan loo yaqaan izakaya (居酒屋), Oo ku bixiya cunno iyo cabitaan jawi isku mid ah, oo u eg sida baararka u eg (eeg Japan wixii faahfaahin ah). Silsilad jaban izakaya sida Tsubohachi (つ ぼ 八) iyo Shirokiya (白 木屋) badiyaa waxay leeyihiin menus sawir ah, sidaa darteed dalabku waa fududahay, xitaa haddii aadan aqoon Japanese - laakiin ha la yaabin haddii meelaha qaarkood ay leeyihiin nidaamyo dalbashada shaashadda oo keliya oo Jabbaan ah.
Ikhtiyaar kale oo guud, oo inta badan aan la rumaysan karin dhegaha aan Japan ahayn, ayaa ah "waxaad cabbi karto oo dhan" (nomihōdai, 飲 み 放 題), halkaas oo aad ka cabi karto waxaad rabto oo dhan oo ka kooban menu go'an 90 daqiiqo ama 120 daqiiqo. Tan waxaa loola jeedaa xafladaha kooxaha, waxaana guud ahaan lagu lamaaneeyaa cunno, badiyaa “waxaad cuni karto oo dhan” (tabehōdai, べ 放 題), badanaa qol gaar ah. Helitaanka walxaha la dalbaday waxay ku xirnaan doontaa sida badanaa server-yadaadu u go'aansadaan inay soo saaraan sheygan, taas oo macnaheedu yahay inaad "xiiqdo" ilaa xad, oo aad dareento wax ka yar run "khibrad dhan oo aad cabi karto / cuni karto". Tani waxay kuxirantahay aasaaska. Waxa kale oo jira dhowr baararka jaban oo aad ka heli karto cabitaan ¥ 300 ama xitaa ka jaban.
Cabitaanka Tokyo ee ugu caansan waa Hoppy (hoppi, ホ ッ ピ ー), oo ah cabitaan aan caadi ahayn oo biir-dhadhan fiican leh (0.8% aalkolo), kaas oo la cabbo isku darka shōchū (at 25%) ee saamiga 5: 1, oo keenaya qiyaastii 5% cabitaanka aalkolada, asal ahaan biir beddel ah. Tan waxaa lagu heli karaa izakaya ka sii weyn waxayna la kulantay dib u soo kabasho xilli dambe ah, in kasta oo aysan si gaar ah dhadhan u lahayn. Cabitaan kale oo Tokyo ah ayaa ah Denki Bran (電 気 ブ ラ “," brandy electric "), nooc summad dhadhan u leh oo la heli karo (lagu cabi karo ama ku jira dhalooyinka) baarka Kamiya (神 谷 バ ー) ee Asakusa, oo ku taal isgoyska weyn ee metro saldhigga
Noocyada waaweyn ee biirka ayaa si ballaaran loo heli karaa, sida caadiga ah ¥ 500- ¥ 800 halkii galaas ama dhalo, laakiin microbrews iyo biirka shisheeye ayaa ah kuwo dhif ah oo la heli karo oo badanaa qaali ah. Guud ahaan waad kafiican tahay helitaanka dhalooyinka microbrews dukaamada qaaska ah. Popeye ee Ryōgoku waa mid naadir ah, oo leh 70 biir tubbada! Xulashada kale ee caanka ah waa Saldhigga Beer ee Ebisu, oo u adeegta noocyo badan oo khamri Yebisu ah iyo u dhigma cuntada Jarmalka.
Kabax ku saabsan cabitaan ama labo, Western Shinjuku's Park Hyatt Tokyo waxay ku taalaa New York Bar heerka 52. Bixinta aragtiyo cajaa'ib leh habeen iyo maalin Tokyo dhan, sidoo kale waxay ahayd goobta filimka Lost in Translation. Is biirsaday halkan waxay ka bilaabmaan qiyaastii ¥ 1400 - wiigga maltiga keli ah ayaa ka sarreeya ¥ 2000. Is biirsadka cajiibka ah, ee lagu bixiyo “duulimaadyada dhadhaminta” ee 4 ama 6 cabitaan ah, waxaa sameeya Gen Yamamoto bartiisa Azabu-Jūban, qiyaastii ¥ 6000 oo loogu talagalay 6 cabitaan (a la carte cocktails waxaa lagu heli karaa shubitaanno waaweyn larger 1600– ¥ 1800) Duulaankii
Booqashooyinka naadiyada iyo goobaha habeenkii ee qaab-dhismeedka reer galbeedka ayaa qaali noqon kara, iyadoo naadiyada iyo guryaha tooska ah lagu fuliyo kharashka dhammaadka usbuuca ee qaybta – 2000-5000 (oo badanaa ay ku jiraan kuubbo cabitaan ama labo)
Haddii aad ku cusub tahay magaalada, Roppongi wuxuu leeyahay xarumo ku takhasusay u adeegidda ajaanibta - laakiin sidoo kale waxaa ku qulqulaya ajaanibta, hoteelada, iyo 'macaamiisha' kuwaas oo had iyo jeer kugu dhibi doona inaad booqato naadiyada ragga, halkaasoo cabbitaanadu ay yihiin ¥ 5000 iyo wixii ka sarreeya. Dad badan oo Jabaan ah iyo ajaanib badan ayaa iska ilaaliya aaggan, iyaga oo doorbidaya naadiyada iyo baararka ku yaal Shibuya, ama Ginza, Ebisu, ama Shinjuku.
Hub The, silsilad cabitaanno ah oo u eg qaabka Ingiriiska, ayaa laamo ku leh Shinjuku, Shibuya, iyo Roppongi (iyo sidoo kale meelaha ugu waaweyn ee u dhow) waana qiimo jaban oo caan ku ah ajaanibta iyo dadka reer Jaban. Baararka kale ee Ingiriiska / Irish waxaa laga heli karaa Roppongi, Shinjuku iyo Shibuya. Filo inaad bixiso qiyaastii ¥ 1000 pint, inkasta oo saacadaha farxadda leh ay tan ku yareyn karaan dhowr boqol oo yen.
Shibuya, aagga baarka ee ka dambeeya 109 (ma aha 109-2) oo ku xigta Dogenzaka ("Love Hotel Hill") wuxuu leeyahay naadiyo badan. Si ka duwan kuwa ku jira Roppongi iyo Shibuya's Gas Panic, naadiyadan waxay leeyihiin lacag laga soo galo, laakiin naadiyada aan lahayn khidmada gelitaanka badanaa waxay kugu dhibayaan habeenki oo dhan si aad u iibsato cabitaanno ku dhammaanaya sida qaali ah oo aan lahayn dad runtii u jooga inay ku raaxaystaan ​​muusikada. Shinjuku waxay hoy u tahay Kabukichō, Japandegmada ugu weyn ee nalka cas-cas. Sidoo kale Shinjuku waa degmada baarka khaniisiinta ee Shinjuku-nichome. In yar oo ka durugsan bartamaha magaalada ayaa ah Shimokitazawa, Koenji iyo Nakano, oo ay ka buuxaan baarar wanaagsan, maqaayado iyo "guryo nool" oo bixiya muusikada dhulka / indie ee caanka ku ah ardayda iyo 20/30-da.
In kasta oo aysan ahayn mid gaar u ah Tokyo oo keliya, guryaha qubeyska waxaa ku badan Japan. Waxa kaliya ee ay tahay inuu aqoon yahanku ogaado waa in qubaysyadan aan loogu talo gelin inay wax ku maydhaan! Si fiican u xoq ka hor intaadan galin qubeyska qoob dheer si aan cidi ugu muuqan askance! Sidoo kale xusuusnow, tattoo-yada looma ogola, xitaa dumarka.
Hoteellada kaabsalku waa kuwo u gaar ah Tokyo sababtoo ah boos la'aan. Dadku dhab ahaantii waxay ku seexdaan wax u eg kaabsol ama qol yar. Meelahan yar yar ee leh albaabka albaabkiisa xitaa boos uma bannaana ninka, oo kuwani waxay u muuqdaan inay rag yihiin oo keliya, inay toos u istaagaan.
Qaar ka mid ah hudheelada kaabsalku waxay aadeen suuq yar oo waxa ku jira saunas iyo wixii la mid ah, waxa kale oo jira kuwo u adeega dumarka iyo dalxiisayaasha iyaguna. Waa hab ka raqiisan oo lagu sii joogo magaalada laakiin waxaa loola jeedaa joogsi halkii laga joogi lahaa joogitaan dheer. Shandadaha waa in lagu dhaafaa miiska maadaama aysan boos ku oolin kaabsulka.
Dadkaas kaliya ee ay tahay inay makhaayad ku cabaan, nasiib ayey ku leeyihiin. Tokyo wali waxay leedahay qaybo sigaar cabista iyo sigaar la'aantaba Si kastaba ha noqotee, waxay fadhiisinayaan dadka soo booqda qaybta aan sigaar cabbin ilaa aan si kale loogu sheegin.
Ugu dambeyntii, waxaa jira wax la mid ah aadaabta tababarka ee Tokyo. Tusaale ahaan, waa ammaan in la seexdo iyada oo aan laga cabsanaynin in wax lagaa dhaco iwm, laakiin lugaha ha ku kala qaadin goobta oo dhan maxaa yeelay taas waxaa loo arkaa inay tahay mid aad u edeb daran. Dadka deegaanku ma weydiisan doonaan in laga saaro lugta dambiga leh maxaa yeelay waa dad edeb badan.
Ugu dambeyntiina, jaranjarooyin badan ayaa ku yaal saldhigyada tareennada ee Tokyo, laakiin waa wax aad u qallafsan in qof laga caawiyo inuu jaranjarada fuulo markii ay wateen shandado waaweyn. Waxaa loo arkaa inay tahay aflagaado sabab kasta ha noqotee inkasta oo ay ka hor imaanayso badarka reer galbeedka badan.
In ka badan 500 sano, magaalada Tokyo waxay mar ahayd tuulada kalluumeysiga ugu yar Edo (江 戸 - macno ahaan Iridda Webiga) sababtoo ah meesha ay ku taallo afka Sumida-gawa. Magaalada kaliya waxay si dhab ah u bilaabatay inay koraan markii ay noqotay kursiga Tokugawa shogunate sanadkii 1603, kaasoo go'aansaday inuu sameeyo kursi cusub oo awood ah meel aad uga fog khiyaanooyinka maxkamada boqortooyada ee Kyoto. Dib u soo celinta Meiji ka dib 1868, xilligaas oo qoyska Tokugawa ay lumiyeen saameyntooda, boqorka iyo qoyska boqortooyada ayaa halkaan uga soo guuray Kyoto, magaaladiina waxaa loogu beddelay magaceeda hadda, Tokyo, oo macno ahaan ah "Bariga Bari". Xarunta weyn ee magaalada, Tokyo waa meesha loogu talagalay ganacsiga, waxbarashada, dhaqanka casriga ah, iyo dowladda. (Taasi maaha in la yiraahdo tartamayaasha sida Osaka ma doodi doonaan sheegashooyinkaas.)
Dhaqanka & Dhaqanka Tokyo
Tokyo waa baaxad weyn: waxaa ugu wanaagsan in laga fikiro in aan hal magaalo oo keliya ahayn, laakiin waa koox xiddig magaalooyin isku soo koray. Degmooyinka Tokyo waxay ku kala duwan yihiin dabeecad ahaan, laga soo bilaabo aaladda elektarooniga ah ee Akihabara ilaa jardiinooyinka Imperial iyo cibaadada Chiyoda, laga bilaabo dhaqanka dhalinyarada ee 'hyperactive mecca' ee Shibuya ilaa dukaamada dhoobada iyo suuqyada macbadka ee Asakusa. Haddii aadan jeclayn waxaad aragtay, ku bood tareenka oo aad saldhiga xiga, waxaadna helaysaa wax gebi ahaanba ka duwan.
Baaxadda weyn iyo xawaaraha ficil ahaanta ee Tokyo waxay cabsi gelin kartaa booqdaha markii ugu horreysay. Inta badan magaaladdu waa hawdka shubka iyo fiilooyinka, oo ay ku badan yihiin neon iyo sameecado dhawaaqaya. Waqtiga degdegga, dadku waxay ku mashquulsan yihiin tareenno fara badan iyo dad aad u tiro badan oo ku sii qulqulaya saldhigyo aad u weyn oo wareer leh. Ha isku mashquulin inaad calaamadeyso indhaha dalxiis ee liiskaaga: inta badan dadka soo booqda, qaybta ugu weyn ee waayo-aragnimada Tokyo waxay kaliya ku meeraystaan ​​si aan kala sooc lahayn oo ay u nuugaan jawiga, madaxaaga u duub dukaanada lagu iibiyo waxyaalaha cajiibka ah iyo kuwa cajiibka ah, maqaayadaha muunad qaadashada halkaas oo aadan ku aqoonsan karin hal shay oo ku yaal menu-ka (ama saxankaaga), iyo helitaanka cilaaqo aan la filayn oo xasilloon oo ka jirta dhulka xasilloonida ee xaafadda Shinto. Dhammaanteed waa ammaan, dadka maxalliga ahna waxay u tegayaan mararka qaarkood dherer aan caadi ahayn si ay kuu caawiyaan haddii aad weydiiso.
Tokyo waxaa lagu sifeeyay inay jiifto aagga cimilada kuleylka ah waxayna leedahay shan xilli oo kala duwan.
Spring wuxuu ku bilaabmayaa ubaxyada dabayaaqada dabayaaqada Febraayo, oo ay ku xigto ubaxyada caanka ah ee cherry (Sakura) Maarso – Abriil. Jardiinooyinka, ugu caansan Ueno, waxay ka buuxsamaan darbiyada buluugga ah iyo kuwa mushahar qaata.
Xilli roobaadka (ba or tsuyu) dabayaaqadii Maajo ilaa Juun waxay ka dhigan tahay bil cirka isku shareeray oo qulqulaya oo lagu soo daadiyay roobab da'ay, oo leh heer kulka labaataneeyada.
Summer runti wuxuu bilaabmaa bisha Luulyo, oo leh cimilo nadiif ah laakiin heerkulku wuxuu gaarayaa soddon iyo soddon iyo qoyaan qubeys xun. Xitaa socod gaaban oo banaanka ah ayaa kaaga tagi doona dhidid, sidaa darteed waqtigaan waa waqtigii ugu xumaa ee sanadka la booqdo, waxaana ugu wanaagsan in laga fogaado haddii aad dooratid. Meesha kaliya ee dhalaalaysa ayaa ah farabadan oo ah rashka, gaar ahaan gaar ahaan epic pyrotechnic extravaganza ee Sumidagawa Fireworks Festival sabtida afaraad ee bisha Luulyo.
Fall laga bilaabo Sebtember wixii ka dambeeya macnaheedu waa heerkulka qabow iyo midabada dayrta. In kasta oo koonfurta Japan ay si joogto ah u garaacaan duufaanno xilligan oo kale, haddana intabadan (laakiin had iyo jeer maahan) waxay ka baxaan Tokyo.
Winter caadi ahaan waa mid khafiif ah, oo leh heerkul guud ahaan u dhexeeya 0-10 ° C, in kasta oo xilliyada qabow qaarkood ay soo diraan heerkulka hoos uga dhacaya eber habeenkii, kuleylka gudahana wuxuu reebi karaa waxyaabo badan oo la doonayo. Barafku waa dhif iyo naadir, laakiin munaasabadahaas dhifka ah dhawrkii sanaba mar markii Tokyo ay ku dhacdo duufaan baraf wata, inta badan shabakadaha tareenku way sii socdaan.
Ku soo wareegida Tokyo
Tareen iyo tareen dhulka hoostiisa mara
Tokyo waxay leedahay mid kamid ah nidaamyada gaadiidka dadweynaha ee ugu balaaran aduunka waana nidaamka dhulka hoostiisa mara ee ugu isticmaalka badan aduunka marka laga hadlayo raacida rakaabka sanadlaha ah. Waa nadiif, ammaan iyo hufnaan - iyo wareer.
Jahwareerku wuxuu ka dhashay xaqiiqda ah in dhowr nidaam tareen oo kala duwan ay ka shaqeeyaan gudaha Tokyo - shabakadda JR East, labada shabakadood ee tareennada dhulka hoostiisa mara, iyo khadadka gaarka loo leeyahay ee kala duwan - iyo khariidado kala duwan oo waddo kala duwan ah ayaa muujinaya nidaamyo kala duwan. Ka fogow saacadaha degdegga ah haddii ay suurtagal tahay; tareenada ayaa si fudud u buux dhaafiya.
Qadka tareenka ee qeexaya Tokyo waa JR Khadka Yamanote (山 手 線 Yamanote-sen), kaas oo ku dhex wareega wareega bartamaha Tokyo; joogitaanka gudaha loo yaqaan 'Yamanote loop' wuxuu la mid yahay joogitaanka xudunta Tokyo.
Ku dhowaad dhammaan khadadka JR ee u dhexeeya gobollada iyo khadadka gaarka loo leeyahay waxay ka bilaabmaan saldhig ku yaal Yamanote. Khadadka JR waa kuwo midabbeysan, Yamanote-na waa iftiin cagaaran. JR Khadka Chuo (orange, 中央 線 Chūō-sen) iyo Khadka Chuo-Sobu (jaalaha ah, 中央 ・ 総 武 線 Chūō-Sōbu-sen) ordaya dhinac-dhinac, bisecting the loop Yamanote laga bilaabo Shinjuku dhanka galbeed ilaa Tokyo bariga.
Khadadka kale ee safarka JR, Saikyo iyo Keihin-Tohoku, waxay ka baxayaan qarka loo yaqaan 'Yamanote loop' waqooyiga iyo koonfurta. JR East waxay leedahay khad macluumaad Ingiriis ah oo wanaagsan, 050-2016-1603 ama 03-3423-0111.
Khadadka dhulka hoostiisa mara
Tokyo waxay leedahay baaxad weyn Tareenka hoose shabakad tareenno isdaba joog ah leh, kuwanna waxay ugu horrayn faa'iido u leeyihiin ka wareegga wareegga 'Yamanote loop' Ku Tokyo Metro waxay socotaa sagaal xariiq: Ginza, Marunouchi, Hibiya, Tozai, Chiyoda, Yurakucho, Hanzomon, Namboku iyo Khadadka Fukutoshin. Toei wuxuu ka shaqeeyaa khadadka Asakusa, Mita, Shinjuku, iyo Oedo. In kasta oo JR Yamanote Line uusan aheyn qad tareenka dhulka hoostiisa mara, muhiimadda ay leedahay oo ah halbowlaha gaadiidka waaweyn ee magaalada Tokyo, haddana waxaa badanaa lagu muujiyaa khariidadaha dhulka hoostiisa mara. Intaa waxaa dheer, waxaa jira inta badan dhulka hoostiisa mara ee 'Rinkai Line', khad gaar loo leeyahay oo ay maamusho Aagga Tooska Tokyo Waterfront Aagga (TWR), oo sii mara Jasiiradda Tokyo / Odaiba.
Ogeysiisyada iyo calaamaduhu badanaa waxay ku hadlaan laba luqadood oo kala ah Jabaan iyo Ingiriis, in kasta oo meelaha qaarkood ay u dalxiis tagaan, calaamadaha Kuuriya iyo Shiinaha ayaa sidoo kale lagu arki karaa. Taasi waxay tidhi, shaqaalaha ka hawlgala saldhigyada ayaa si dhif ah u hadlaa, haddii Ingiriisi yahay.
Qaar ka mid ah Khadadka safarka ee gaarka loo leeyahay ka soo baxa qaybta loo yaqaan 'Yamanote loop' ee loo maro qaybaha iyo hareeraha magaalada, iyo ku dhowaad dhammaantood waxay si toos ah ugu xirmaan khadadka tareenka dhulka hoostiisa mara. Khadadka gaarka loo leeyahay ayaa faa'iido u leh safarada maalinlaha ah ee ka baxsan magaalada, waana in yar ka jaban JR. Kuwaas waxaa ka mid ah, kuwa ugu muhiimsan ee soo booqdayaashu waa muran la'aan Yurikamome kaas oo bixiya aragtiyo wanaagsan wadada loo maro jasiiradda Tokyo / Odaiba.
Maskaxda ku hay in ay tahay edeb daro in lagu hadlo taleefanka intaad tareenka ku jirtay; waa inaad dirtaa farriimaha qoraalka bedelkeeda. Markaad isticmaaleyso wiishashka, hubi inaad adiga bidix istaag marka dadka degdegaya ayaa kaaga mari kara dhanka midig.
Lacagta iyo saacadaha
Inta badan tikidhada iyo kaararka waxaa laga iibiyaa mashiinada iibinta otomaatiga ah. Mashiinadan ayaa kala ah lacag caddaan ah oo keliya laakiin isbedel sii. Tareenada JR waa bilaash a Japan Wadada Tareenka.
Kaadhadhka lacag bixinta waa kuwo ku habboon oo aad loogu taliyay maxaa yeelay waxay kuu oggolaanayaan inaad raacdid tareennada adigoon akhrinin khariidadaha tikidhada Japan-ka keliya qaata si loo ogaado qiimahaaga. Waxaa jira laba nooc oo ah kaararka lacagta lagu shubto ee JR East Suica, Iyo PASMO, oo ay bixiso khadadka gaarka loo leeyahay (non-JR). Ficil ahaan gabi ahaanba waa la is weydaarsan karaa waxaana loo isticmaali karaa wax walba oo tareenka dhulka hoostiisa mara, tareenka iyo qadka basaska ee Tokyo (marka laga reebo Shinkansen iyo tareennada xaddidan ee xaddidan). Si kastaba ha noqotee, kaararka Suica waxaa soo celin kara oo keliya JR East, halka kaararka PASMO ay soo celin karaan oo keliya kuwa aan ka shaqeyn JR haddii aad rabto inaad ku soo celiso dhammaadka booqashadaada. Waxay sii shaqeynayaan 10 sano laga bilaabo macaamilkii ugu dambeeyay, markaa waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad xafido safarkaaga xiga.
Kaadhadhka tikidhada ayaa dib loo buuxin karaa "kaararka casriga ah": waxaad si fudud uga taaban kartaa kaarkaaga salka taabashada ee ku ag yaal wareegga baabuurka markaad gasho, isla markaana samee isla marka aad marayso inaad ka baxdo Waxaa jira deebaajiga ugu horreeya ee ¥ 500 oo ay tahay inaad bixiso markaad iibsanayso kaarka safarka, laakiin ilaa ¥ 20,000 oo qiimahoodu waa lagu keydin karaa kaar kasta. (Ereyga "kaarka safarka" waa xoogaa macno-darro ah; Suica iyo PASMO waa kaararka bangiga ee qiimaha-keydka ah, oo ay u aqbalaan lacag-bixinno adeegyo kale, mashiinnada wax lagu iibiyo ilaa dukaamada qaarkood. waqtiga aad baxeyso Japan, waxaad si fudud ugu bixin kartaa makhaayad ama dukaan bilaa cashuur ah oo ku yaal garoonka diyaaradaha.) Haddii aad ka imanaysid meel kale oo ka mid ah Japan, kaararka casriga ah ee gobollada kale badankood, sida Kansai's ICOCA ama Hokkaido's Kitaca waxaa loo isweydaarsan karaa Suica iyo PASMO. Si kastaba ha noqotee, kuwan laguma soo celin karo Tokyo, markaa waa inaad ku noqotaa gobolladooda haddii aad rabto inaad lacagtaada dib u hesho.
Ka weyn Shabakadda Korantada kaararka lama aqbali doono mar dambe. Haddii aad weli leedahay qaar ka mid ah kuwan, waad u beddeli kartaa a PASMO or Suica kaarka.
Waxa kale oo jira tikidhada qaaska ah ee u oggolaanaya safarka aan xadidnayn, laakiin badankood uma badna inay faa'iido u leeyihiin dalxiisayaasha illaa aad qorsheyneyso inaad nus maalintaada ku qaadato tareenka.
The Wadada Tokunai (都 区内 パ ス) waa marin hal maalin ah oo wanaagsan safarka khadadka JR meel kasta oo ka mid ah 23-ka waaxood ee Tokyo (oo ay ku jiraan dhammaan Yamanote Line iyo xarumo badan oo ku xeeran). Waxay ku kacaysaa ¥ 730, taasoo ka dhigaysa mid dhaqaale haddii aad qorsheyneyso inaad sameyso shan ama wax ka badan tareen hal maalin gudaheed. Kala duwanaansho ayaa ah Tokunai Bilaash Ah Kippu (都 区内 フ リ ー き っ ぷ), oo sidoo kale ay kujirto safar wareeg ah oo lagu galayo Tokyo saldhigyada kuyaala hareeraha magaalooyinka. The Monorail Iyo Tokunai Kippu Bilaash ah, oo ah mid wanaagsan laba maalmood oo ay ku jiraan safar wareeg ah oo ka yimaada Madaarka Haneda illaa iyo bartamaha Tokyo, sidoo kale waxaa lagu iibiyaa ¥ 2,000.
The Tokyo Bilaash ah Kippu (東京 フ リ ー き っ ぷ) wuxuu daboolayaa dhammaan JR, jidadka dhulka hoostiisa mara iyo khadadka basaska magaalada ee ku dhex yaal 23ka waaxood. Waxay ku kacaysaa 1,580 XNUMX for maalintii, waxayna daboolaysaa dhowr meelood oo aan adeegin JR, sida Roppongi iyo Odaiba.
The Fasax Fasax ah (ホ リ デ ー パ ス) wuxuu daboolayaa dhamaan shabakada JR ee agagaarka caasimada Tokyo, oo ay kujiraan Chiba, Kanagawa, Saitama iyo galbeedka Tokyo. Waxay ku kacaysaa 2,300 20 hal maalin, waxaana la heli karaa oo keliya maalmaha fasaxa ah, ciidaha qaranka iyo inta lagu jiro fasaxa xagaaga (Julaay 31 ilaa Ogosto XNUMX).
Hadaad bixinaysid à la carte, Tareennada dhulka hoostiisa mara iyo tareennada waxay ku saleysan yihiin masaafad, laga bilaabo ¥ 110 ilaa ¥ 310 oo loogu talagalay hops dhexdeeda bartamaha Tokyo. Sharci ahaan guud ahaan, Khadadka Metro ee Tokyo waa kuwa ugu raqiisan, khadadka Toei waa kuwa ugu qaalisan, Khadadka JR-na waxay ku dhacaan meel dhexe (laakiin badiyaa way ka jaban yihiin Metro safarada gaagaaban, yacni kama badna 4 saldhig). Qaar badan oo ka mid ah khadadka gaarka loo leeyahay waxay la falgalaan tareennada dhulka hoostiisa mara, taas oo mararka qaarkood ka dhigi karta hal raac mid u muuqda si aan macquul ahayn oo qaali ah maaddaama aad nuxur ahaan u wareegeyso khad kale iyo sicir-raac, inkasta oo aad weli ku jirto isla tareenka. Tusaale ahaan beddelida inta udhaxeysa Tareenka dhulka hoostiisa mara ee Tareenka dhulka hoostiisa mara iyo khadadka khaaska ah ee loo yaqaan Tokyu ayaa bixinaya isku darka qiimo kasta: qiimaha ugu yar ee Metro ¥ 160 + qiimaha ugu yar ee Tokyu ¥ 120 = ¥ 280. Intaa waxaa dheer, qaabab kala duwan oo kala iibsi ah ayaa lagu taxay "Qiimo dhimista Xawilaadda", tan ugu caansanna waa discount 70 qiimo dhimis, taas oo khuseysa kala iibsiga u dhexeeya Khadadka Tareennada ee Tokyo Metro iyo Toei. Markaad isticmaaleyso Suica ama PASMO, waxaad ku heli kartaa dhammaan qiimo dhimista tooska ah. Xarumaha kala iibsiga qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka gudubto albaab gaar ah oo loo wareejiyo (tikidhada waraaqaha iyo PASMO / Suica labadaba) taas oo midab liin leh leh - markaad ka gudubto albaabka caadiga ah ee buluugga ah kaama heli doonto qiimo dhimistaada wareejinta iyo haddii aad tikit warqad ah , dib u heli maysid Meelaha qaar laga wareejiyo (tusaale ahaan saldhigga Asakusa) waxaad runtii u baahan kartaa inaad ku wareejiso heer waddooyin maadaama labada idaacadood (Metro Ginza Line iyo Toei Asakusa Line) aysan jidh ahaan isku xirnayn oo ay u jiraan hal guri oo kala fog.
Waa lacag in la hubiyo jidkaaga kahor. The Navigation Subway Navigation ee Dalxiisayaasha waxaa leh Tokyo Metro, waa barnaamij mobilo kuu ogolaanaya inaad qorsheyso tareenka dhulka hoostiisa mara oo aad ku tababarto safarka dhibic A ilaa dhibic B, kuna saleysan waqtiga, qiimaha, iyo wareejinta. Barnaamijkan wuxuu macluumaad ka siiyaa Tokyo oo keliya. Barnaamijyada kale ama boggaga kale ee dalka oo dhan ka kooban, eeg Japan .
Haddii aadan garan karin inta ay tahay halka loo socdo, waxaad iibsan kartaa tigidhka ugu jaban oo waxaad ku bixin kartaa farqiga Mashiinka Isku-hagaajinta Fare (norikoshi) dhamaadka. Mashiinnada iibinta badankood waxay kuu oggolaan doonaan inaad iibsato hal tikidh oo daboolaya kala iibsiga u dhexeeya JR, tareennada dhulka hoostiisa mara iyo khadadka gaarka loo leeyahay, illaa meesha aad u socoto, laakiin ka shaqeynta sida loo sameeyo tan waxay noqon kartaa caqabad haddii aadan aqoon u lahayn nidaamka. Markaad u kala wareejinayso nidaamka, ha ahaato inaad ku bixiso tikidhada ama kaararka casriga ah, isticmaal albaabada wareejinta oranjiga si looga baxo Haddii kale, waxaa lagaa qaadi doonaa qiimo buuxa labada qaybood ee safarkaaga oo kala duwan, halkii lagaa qaadi lahaa qiimaha wareejinta ee ka jaban.
Khadadka tareenka badankood ee Tokyo waxay socdaan laga bilaabo 05: 00 illaa 01: 00. Inta lagu jiro saacadaha ugu sarreysa waxay socdaan qiyaastii saddexdii daqiiqaba hal mar; xitaa inta lagu jiro saacadaha ka baxsan shaqada waxay ka yar tahay toban daqiiqo tareennada dhexdooda. Habeenka kaliya ee adeegyada rakaabka caadiga ah ay habeenki socodsiiyaan ayaa ah Fasaxa Sanadka Cusub ee khadadka la xushay.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee safarka tareenka gudaha Japan guud ahaan, tixraac qaybta By tareenka ee Japan maqaal
Tagaasida waa kuwo aad u qiimo badan, laakiin waxaa laga yaabaa inay qiimo u leeyihiin kooxaha ka kooban saddex ama in ka badan. Sidoo kale, haddii aad seegto tareenkaagii ugu dambeeyay, waxaa laga yaabaa inaadan haysan ikhtiyaar kale.
Qiimaha ayaa dib loo eegay sanadkii 2017 iyadoo dadaal loogu jiray in tagaasida laga dhigo mid soo jiidasho leh marka loo safro meelaha fog, in kastoo safarada dhaadheer ay wali qaali yihiin. Qiimaha tikidhada caadiga ah wuxuu ka bilaabmaa 410 80 kiiloomitir kii ugu horreeyay, wuxuuna kacayaa ¥ 237 90 mitir kasta iyo 20-kii ilbiriqsi kasta ee joogsiga ama gaabiska taraafikada. 22% siyaado ah oo habeenkii ah ayaa lagaa qaadayaa laga bilaabo 00: 05-00: XNUMX, waxaana lagu darayaa lacago safarro ah safarada kasta oo isticmaalaya wadada weyn.
Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyinka qiimaha maalinlaha ah ee ku saleysan qiyaasaha qiimaha tagaaga ee Nihon Kotsu (qiimaha dhabta ah wuu kala duwanaan karaa):
Saldhigga Tokyo ilaa Saldhigga Akihabara - 2.5 km - ¥ 1130
Saldhiga Tokyo ilaa Saldhiga Shinjuku - 8 km - ¥ 3300
Saldhigga Tokyo ilaa Haneda Airport - 16 km - ¥ 7000 oo ay kujirto qiimaha wadada
Albaabbada rakaabka bidix ee tagaasida waxaa ku shaqeeya darawalka wuuna furan yahay si otomaatig ahna wuu u xirmayaa. Ha furin ama ha xiro naftaada.
Ha isku hallayn darawalkaaga taksi oo ku hadlaya Ingiriisiga - ama ka garanaya in ka badan meelaha ugu caansan, in kasta oo tagaasida badankeedu ay leeyihiin nidaamyo "car navi" GPS ah Waxa ugu fiican uguna fudud ee la sameeyo waa in la diyaariyo khariidad ku calaamadeysan meesha aad rabto inaad tagto, oo lagu tilmaamo khariidada tagsiilaha. Haddii aad degan tahay hudheel, waxay ku siinayaan khariidad. Haddii ay suurtagal tahay, soo qaado kaarka ganacsiga, ama ku daabac cinwaanka afka Jabbaan meelaha gaar ah ee aad rabto inaad tagto. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah gudaha Japan jidadka badanaa lama calaamadeeyo, haddii taksiilaha uusan haysan GPS waxaa laga yaabaa inuusan awoodin inuu sameeyo wax ka badan inuu ku geeyo agagaaraha guud ee meesha aad rabto inaad aado. Sidoo kale, tagaasida waxaa lagu qabsan karaa saxmada taraafikada. Tilmaamo lama filayo ama lama siinayo.
Nihon Kotsu waxay leedahay lambar taleefan Ingiriis ah oo 24-saac ah, 03-5755-2336, si loogu waco tagsiga Nihon Kotsu ee Tokyo dhexdeeda. Waxaa jira lacag jaale ah oo la siinayo darawalka dhamaadka safarka: ¥ 410 oo ah duufaan degdeg ah ama ¥ 820 oo horay loogu sii ballansaday. Haddii aad horey u haysatid meel aad u socoto (ama inyar) maskaxda ku haysa, soo dhaweyuhu wuxuu si elektaroonik ah ugu gudbin doonaa macluumaadka darawalka si aanad adigu ugu sheegin darawalka laftiisa. Hadaad taksi udhaweyneyso isla markiiba, qaabilaada ingiriiska ayaa kugu wargalin doonta taksi lagugu qoray midab, magaca shirkada iyo nambarka taksiga
Tiro sii kordheysa oo shirkado ah oo ku yaal Tokyo ayaa sidoo kale bixiya dhagxaanta tagaasida iyo codsiyada codsiyada ee moobaylka. Miiska hore ee hudheelkaaga ayaa sidoo kale kuu soo wici kara taksi adiga oo raacaya isla qarashyada ballansashada.
Tokyo waa dariiq weyn oo wadooyin cidhiidhi ah oo aan magacyo lahayn, oo leh taraafikada qunyar socodka ah iyo baarkinka baabuurta oo aad u kooban oo qaali ah. Magaaladaan oo leh nidaam aad ufiican oo loo maro gawaarida, waxaad ubaahan laheyd sabab macquul ah oo aad rabto inaad kuwareegto. Intaad kireysaneysid gaari macno ayey samayn kartaa Japan xaaladaha qaarkood (tusaale ahaan, booqashada dhulka miyiga ah ee loo dalxiis tago), guud ahaan ma ahan wax ku habboon ama dhaqaale ahaan in la kireeyo baabuur si aad ugu soo wareegto metro Tokyo. Tagaasida ayaa aad uga habboon haddii miisaaniyaddaadu kuu saamaxdo; socodka ama gaadiidka dadweynaha ayaa aad uga qaalisan oo marka la eego dhibaatooyinka marinka iyo helitaanka la dhigto meelaha caanka ah, waxay u badan tahay inay sidoo kale fudud tahay.
Haddii aad go'aansato inaad dhex gasho oo aad baabuur ku dhex socoto, wadada weyn ee weyn ee u adeegta Tokyo waa Shuto Expressway, oo loo soo gaabiyo Shutoko (首都 高). Khadka loo yaqaan 'C1 Loop Line' wuxuu sameeyaa goobo ku wareegsan bartamaha Tokyo, oo la mid ah moodada sida Khadka Yamanote uu ugu sameeyo tareenka. Laakiin halka Khadka Yamanote uu kaa qaadayo ¥ 130-250 safar hal mar ah, inaad gaari ku dhex wadato Shutoko ee Tokyo waxay xaq kuu siineysaa inaad bixiso magacaaban lacagta gelitaanka ¥ 700 markasta oo aad nidaamka gasho, oo lagaa qaadayo lacago dheeraad ah (¥ 300 ama ¥ 500) oo lagasoo aruuriyay meelo kale oo kala duwan.
Ku wadista Wadada Tooska ah ee Tokyo habeenkii waxay noqon kartaa waayo-aragnimo wacan oo qurux badan markaad ku dhex socoto iyo hareeraha nolosha habeennimo ee Tokyo. Markaad baabuur wadid habeenkii waa inaad taxaddar samee oo adeeca xadka xawaaraha: Tartanka waddooyinka in ka badan Shutoko habeenkii wuxuu caan ku noqday 80s iyo 90s ilaa maantana wuu dhacaa, in kasta oo si ka yar loo soo celceliyo. Tartamayaasha dariiqyada waxay inta badan xoogga saaraan waditaankooda Khadka C1 Loop iyo Bayshore (oo caan ku ah magaca Wangan). "Tartamayaasha" mararka qaar waxay fariistaan ​​meelaha gawaarida la dhigto iyo goobaha adeegga ee Shutoko, gaar ahaan Aagga Baarkinka weyn ee Daikoku ee isgoyska Khadka Bayshore iyo K5 Daikoku Line ee Yokohama.
Basaska Toei ee sidan oo kale ah waxay ka shaqeeyaan inta badan jidadka basaska maxalliga ah ee Tokyo
Meelaha yar ee ka mid ah Tokyo ee aan si sahal ah tareen looga heli karin waxaa u adeega shirkado basas kala duwan. Basaska ka shaqeeya gudaha 23-ka waaxood ee Tokyo waxay leeyihiin qiimo go'an iyadoo aan loo eegin masaafada (¥ 210 basaska Toei iyo ¥ 220 shirkadaha kale ee basaska gaarka loo leeyahay), oo lagu bixiyo marka laga soo baxo albaabka hore. Khidmadaha lama wareejin karo; hase yeeshee basaska badankood way aqbalaan Suica or PASMO kaararka safarka (eeg kor). Haddii aad u isticmaasho kaarka "Suica" ama "PASMO" si aad u fuusho Toei Bus, waxaad heli doontaa discount 100 qiimo dhimis ah oo ku saabsan safarkaaga Toei Bus ee soo socda illaa iyo inta ay ku jirto 90 daqiiqo ee safarkii hore. Marka la barbardhigo tareenada, basaska ayaa si aad ah u socod yar, waxayna qaadaan rakaab yar, waana gaabis badan yihiin. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga inay ku qancaan dadka waayeelka ah ee deggan Tokyo, laakiin waxay ku habboon yihiin socotada, kuwaas oo sidoo kale la macaamili doona macluumaad la'aanta Ingiriisiga iyo mararka qaarkood joogsiyada basaska ee aadka u qarsoon. Wadooyinka basku way dhib badnaan karaan badanaana si faahfaahsan ugama qorna meelaha basku istaago; calaamadaha basaska laftoodu badanaa waxay ku taxan yihiin kaliya laba ama saddex joogsi oo waaweyn marka lagu daro asalka iyo halka loo socdo. Baska gudihiisa joogsiga xiga waxaa sida caadiga ah lagu dhawaaqaa dhowr jeer, marna cod cajalad ah marna darawal aamusan. Ogeysiisyada la dhejiyay ee Ingiriisiga ah waxaa loo isticmaalaa xariiqyada qaarkood, laakiin wali waa dhif iyo naadir. Si kastaba ha noqotee, jidadka woqooyi-koonfureed waxay faa'iido u leeyihiin dhinaca galbeed ee magaalada maaddaama Khadadka tareenka (Odakyu, Keio, Chuo, iyo Seibu) ay u socdaan bariga-galbeed.
Iyadoo la isku dayayo in la siiyo macluumaad ku saabsan basaskooda martida / degganeyaasha ajnabiga ah, Toei Bus hadda waxay leedahay degel muujinaya qaar ka mid ah jidadka basaska waaweyn ee loo maro meelaha qaarkood ee Tokyo. Macluumaadkan waxaa lagu bixiyaa Ingiriis iyo dhowr luqadood oo kale.
Baska Sky Hop
Willer Express waxay ka shaqeysaa hop-on, adeegga baska hop-off ee loo yaqaan ' Baska Sky Hop, kaas oo isagu iska dhigaya biiilkiisa “baskii ugu sarreeyay dusha sare ee furan ee furan Japan. ” Iyadoo lagaa qaadayo ¥ 1800 oo ah 24-saac oo baaskiil ah iyo 2500 oo ah 48-saac oo baasaboor ah (qiimaha carruurta badhkood), waad raaci kartaa basaskan oo waad ku boodi kartaa ama ka bixi kartaa markasta oo aad rabto. Waxaa jira saddex wadiiqo basaska shaqeeya, dhammaantoodna waxay ka socdaan Dhismaha Marunouchi ee ku xiga Saldhigga Tokyo: Hal wado ayaa u adeegta Asakusa iyo Tokyo SkyTree, tan labaadna waxay u socotaa Roppongi iyo Tokyo Tower, tan saddexaadna waxay ku sii jeeddaa Odaiba. Adeeggu wuxuu socdaa saacad kasta, iyadoo laga baxo Dhismaha Marunouchi inta u dhexeysa 10:20 iyo 18:30.
Shirkadda Tokyo Cruise Ship Company waxay shaqeysaa taxane ah Baska Biyaha doonyaha mara webiga Sumida iyo Tokyo Bay, isku xira Asakusa, Hinode, Harumi iyo Odaiba. Doomaha waxay ka kooban yihiin safar duuban oo lagu shaaciyey Ingiriis iyo sidoo kale Jabbaan, safarka midna wuxuu ka dhigayaa mid nasasho leh, oo firaaqo leh si loo arko aagagga biyaha ee Tokyo. Doonida mustaqbalka weyn ee Himiko, oo loogu talagalay anime iyo abuuraha manga Leiji Matsumoto, waxay ku socotaa khadka tooska ah ee Asakusa-Odaiba. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si fiican u timaado ka hor waqtiga bixitaanka oo kaliya haddii tikidhada Himiko la iibiyo!
Baaskiillada waxaa badanaa loo isticmaalaa gaadiidka maxalliga ah, laakiin adeegyada sida waddooyinka baaskiilku waa dhif iyo naadir, darawallada ayaa si aad ah ugu fiirsada baaskiilada, taraafikada ayaa aad u culus maalmaha shaqada, marka haddii aad baaskiil isticmaasho, ha ka baqin inaad baaskiil ku lugeyso. sameeyo). Qaybo ka mid ah Tokyo waa wax la yaab leh oo buuro leh, waana shaqo dhidid badan oo lagu wareejiyo kuleylka xagaaga. Bartamaha Tokyo wali si raaxo leh ayaa loogu dabooli karaa baaskiil maalmaha fasaxa ah. Safarka Baaskiilka Weyn ee Tokyo wuxuu bixiyaa booqasho hal maalin ah oo hagitaan ah oo loogu talagalay baaskiil ku wareegida goobaha waaweyn ee dalxiiska ee Tokyo, sida Marunouchi, Nihonbashi, Tsukiji, Odaiba, munaaraddii Tokyo, qasriga Imperial iyo wixii la mid ah.
Kireysiga baaskiil waa suurtagal qaar ka mid ah hoteelada dhalinyarada, gaar ahaan agagaarka Asakusa, in kastoo aysan badnayn. Si kastaba ha noqotee, iibsashada waddo-hal-dheere ah oo fudud ayaa si caddaalad ah u jaban, waxayna ku imaaneysaa iyada oo lagu rakibay nidaam qufulka mootada lagu xidho (tani waa waxa ay dadka Tokyo ah badankood adeegsadaan). Baaskiil badan oo badan oo la soo dhoofiyay ayaa aad qaali u noqon doona ee quful wanaagsan hel, maadaama xatooyada baaskiilku ay tahay khatar guud, in kasta oo dhibaatadu aysan u dhawayn meel ka dhow sida dalalka kale.
Magaaladan weyn oo leh nidaam gaadiid dadweyne oo hufan, socodka si aad uga timaado barta A ilaa dhibic B waxay u muuqan doontaa waxoogaa doqon ah jaleecada hore. Si kastaba ha noqotee, maaddaama magaaladu aad u ammaan tahay xitaa habeenkii, socodka Tokyo wuxuu noqon karaa khibrad aad u wanaagsan. Meelaha qaarkood, socodku aad ayuu uga gaabin karaa qaadashada tareenka dhulka hoostiisa mara iyo socodka tareenka (dhammaan Akasaka / Nagatacho / Roppongi aagga ku yaal bartamaha ayaa tusaale ahaan si fudud lugaha loogu daboolayaa). Haddii aad waqti haysatid, Shinjuku illaa Shibuya oo loo maro Omotesando waxay qaadataa ku dhowaad hal saac, Saldhigga Tokyo ilaa Shinjuku wuxuu noqon doonaa socod maalin badhkeed ah, iyo dhammaan khadka Yamanote Grand Tour wuxuu qaadanayaa maalin dheer.
Waa suurtagal dadka ku hadla Ingiriisiga inay maraan jidka Tokyo iyagoo aan ku hadlin wax Jabaaniis ah. Calaamadaha tareenka dhulka hoostiisa mara iyo saldhigyada tareenka waxaa ku jira magacyada saldhigga ee ku jira romaji (Jilayaasha Romanized), iyo saldhigyada waaweyn badanaa waxay leeyihiin astaamo ku qoran Shiinaha iyo Kuuriya sidoo kale. In kasta oo dadka badan ee da'doodu ka yar tahay 40 sano ay ku barteen Ingiriisiga iskuulka, aqoonta guud ahaan waa mid liidata, inta badan dadka maxalliguna ma yaqaanaan in ka badan dhowr eray iyo weedho aasaasi ah. Makhaayadaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay leeyihiin menus Ingiriis ah, laakiin macnaheedu maahan inay shaqaaluhu ku hadli doonaan Ingiriis badan. Akhriska iyo qorista ayaa aad uga wanaagsan inkasta oo, dad badanina ay fahmi karaan heshiis badan oo Ingiriisi ah iyaga oo aan dhab ahaan garanaynin sida loogu hadlo. Taas oo la sheegay, shaqaalaha hudheelada waaweyn iyo meelaha loo dalxiis tago waxay guud ahaan ku hadlaan heer Ingiriis oo la aqbali karo. In kasta oo ay suurtagal tahay in lagu helo Ingiriis keliya, haddana waxay safarkaaga ka dhigeysaa mid aad u fudud haddii aad baran karto xoogaa Jabbaan ah.
Tokyo waxay leedahay aragtiyo aad u tiro badan, laakiin waxyaabaha ugu horreeya ee ajandaha ugu badan ee soo booqdayaashu waa macbudyada Asakusa, jardiinooyinka Imperial Palace (Chiyoda) iyo kan Meiji Shrine (明治 神宮 Meiji-jingū, Harajuku).
Haddii aad raadineyso madal daawasho, Tokyo waxay leedahay fursado badan:
The Tokyo SkyTree (¥ 2,060-3,090) waa soo jiidashadii ugu dambeysay ee Tokyo, iyada oo aan la xusin sidoo kale waa qaab-dhismeedka labaad ee ugu dheer adduunka, oo kor u kacaya in ka badan 2000 fuudh dhulka. Si kastaba ha noqotee, meesha ay ka fog tahay magaalada hoose waxay ka dhigan tahay aragtida inay tahay meel fog oo dhismayaal ah.
Inta badan la yaqaan Tokyo Tower weli waa hareeraha. ¥ 820-1,420, ma ahan sida qaali u ah kan cusub ee la tartamaya, laakiin sidoo kale aragtidu uma fiicna sida xulashooyinka qaar.
Wixii aragti ah ee ku yaal boorsada jeebkaaga, madaxa ka Dowlada Magaalada Tokyo dhismayaasha (dhaqan ahaan, Tokyo's City Hall) ee Shinjuku. Taawarradeeda mataanaha ahi waxay leeyihiin aalado daawasho oo gabi ahaanba bilaash ah, waxayna ku bixiyaan aragti weyn Tokyo iyo wixii ka baxsan.
The Dhismaha Xarunta Ganacsiga Dunida (10: 00-20: 00, ama 21:00 bisha Luulyo iyo Ogosto, ¥ 620) saldhigga JR Hamamatsucho wuxuu ku bixiyaa aragtiyo cajaa’ib leh Tokyo Tower iyo hareeraha biyaha sababo la xiriira meesha uu ku fiican yahay, gaar ahaan fiidkii.
Muuqaalka Magaalada Tokyo wuxuu leeyahay goob indha indheyn leh oo leh aragtiyo waaweyn oo ku saabsan Tokyo Bay iyo magaalada hoose ee Tokyo oo ay ku jiraan Tokyo Tower-ka u dhow - gelitaanka waa ste 1,800-2,300 ¥, laakiin waxaa ku jira gelitaanka Madxafka Fanka Mori.
The Buundada Roobka isku xirka Tokyo iyo Odaiba waa ikhtiyaar kale oo wanaagsan, haddii aadan dhib ka qabin sawaxanka taraafikada iyo urta. Wadooyinka lugeynaya ee buundada (waxay furan yihiin ilaa 20:00 habeenimo) waa bilaash, aragtida waqtiga-habeenkii ee guud ahaan Tokyo Bay waa mid cajiib ah.
The Xarunta Madaniga ee Bunkyo oo ku xigta Tokyo Dome, oo hal wargeys loogu magac daray "waxsoosaarka nacnaca ee Pez", wuxuu leeyahay goob indha indheyn bilaash ah oo ku taal dabaqa 25-aad oo bixisa muuqaal muuqaal ah oo Shinjuku ka dhan ah Mt. Fuji maalin cad.
Magaalada waxaa ku yaal madxafyo waaweyn iyo kuwo yaryarba, kuwaas oo xarun u ah xiiso kasta oo suuragal ah laga bilaabo qalimaan ilaa saacado qadiim ah illaa farshaxan dhaqameed iyo casri ah. Qaar badan oo ka mid ah matxafyada ugu waaweyn waxay ku urursan yihiin Ueno. ¥ 500 ilaa ¥ 1,000 ama ka badan, khidmadaha gelitaanka si dhakhso ah ayaa laysugu dari karaa.
Riding Sky Bus Tokyo, Dabaq-furan sare oo furan oo ay maamusho Hinomaru Limousine (saacad kasta saacadaha u dhexeeya 10:00 iyo 18:00), ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan in si dhakhso ah loogu wareego bartamaha magaalada. Safarka baska ee 45 daqiiqo ah ee ku saabsan “koorsada T-01” wuxuu kugu wareejin doonaa agagaarka qasriga Imperial iyadoo loo sii marin doono Ginza iyo degmada Marunouchi, taasoo muujinaysa muuqaalka ugu muhiimsan ee ganacsiga iyo ganacsiga Tokyo. Qiimaha tikidhku waa ¥ 1,500 oo loogu talagalay dadka waaweyn ee jira 12 sano iyo wixii ka weyn, iyo ¥ 700 oo loogu talagalay carruurta da'doodu u dhexeyso 4 ilaa 11 sano. Waxaad amaahan kartaa nidaam hagitaan cod oo luuqado badan ah bilaash markaad iibsato tikidh, iyadoo ku xiran helitaanka keydka. Afar koorsooyin kale oo bas ah ayaa la bixiyaa, oo ay ku jiraan safarka habeenkii ee Odaiba, laakiin safaradaas waxaa lagu qabtaa Jabbaan iyada oo aan loo hayn hagitaan luqad ajnabi ah.
Shirkadaha kale ee dalxiiska ee u adeega dalxiisayaasha ajnebiga ah waxay bixiyaan safarro basas ah oo hagitaan Ingiriis ah - JTB waa tusaale aad u fiican.
Eeg xaraashka tuna Suuqa Toyosu oo ku cun a quraac sushi Suuqa Kalluunka ee Tsukiji.
Doon raac raac ah Wabiga Sumida ka yimid Asakusa.
Naftaada ku halaag hawdka neon ee dhalaalaya oo ka baxsan saldhigyada tareenka waaweyn fiidkii. Shibuya iyo bariga Shinjuku habeenkii waxay ka dhigi karaan Times Square ama Piccadilly Circus inay u ekaadaan reer miyi marka la barbardhigo - waa in loo arkaa in la rumaysan karo.
Ku raaxayso qoyn degaanka "sentoAma maydhashada dadweynaha. Ama mid ka mid ah jardiinooyinka mawduuca laga soo doorto sida LaQua at Tokyo Dome (Bunkyo) ama Oedo Onsen Monogatari gudaha Odaiba.
Tag jardiinada madadaalada sida Tokyo Disney Resort, oo ka kooban Tokyo Disneyland iyo Tokyo DisneySea kuwaas oo ah Asia-ta ugu booqashada badan iyo jardiinooyinka mawduucyada ugu booqashada badan siday u kala horreeyaan, ama Jabbaan badan Sanrio Puroland (magaalada Tama), oo ah hoy inbadan oo ka mid ah Hello Kitties intaad qiyaasi karto.
Ku soo biir oo baro boodboodka ama bareerashada gurguurta oo ay weheliyaan kooxaha dhacdooyinka ee Tokyo / Roppongi,
Ka fiiri sinta iyo dhalinyarada ku sugan Harajuku Takeshita-Dori (Takeshita Street) ama inta sii weynaatay Omotesando.
Xilliga guga, ku raaca doon yar Kichijoji quruxdiisa Beerta Inokashira, ka dibna booqo Matxafka 'Ghibli Studios Museum' (oo si fiican loogu yaqaan filimahooda cajiibka ah, sida Spirited Away, iyo Princess Mononoke), laakiin waxaad u baahan doontaa inaad tikidhada ku iibsato kuwan ka hor dukaanka raaxada ee Lawson.
Qaado Yurikamome tareenka kor u kaca ee ka gudbaya buundada weyn ee ka timaadda saldhigga Shimbashi illaa degmada bayside Odaiba, kuna sii socda giraangirta weyn ee loo yaqaan 'ferris wheel' - hal mar oo adduunka ugu weyn.
Ka daawo ciyaar baseball ah, kuwaas oo kala ah Yomiuri Giants oo jooga Tokyo Dome, ama Tokyo Yakult Liqidda garoonka Jingu. Chiba agteeda waxay martigelisaa Chiba Lotte Marines.
Ku soco socod ku dhex maro Jardiinooyinka Bariga Imperial Palace (oo u furan dadweynaha maalin kasta 09:00, marka laga reebo Jimcaha iyo Isniinta).
Meel pantico ah ku dhex dhig baarkinka inta lagu gudajiro ubaxeedka (Sakura). Nasiib darro Sakura waxay socotaa oo keliya illaa hal toddobaad Gu'ga. Laakiin waa laga digayaa, jardiinooyinka ayaa inta badan aad u camiran xilligan.
Ku soo biir maxalliga ah qadada gaaban ama qadada qadarinta guriga ah ee barnaamijka booqashada guriga ee Nagomi Visit ama kaqeybgal fasallada karinta.
Koobinta muraayad nololeedkan quruxda badan ee degmada Shinjuku.
Ku biirista qabiilooyinka casriga ah ee Harajuku markay wax iibsanayaan.
Ku luminta naftaada astaamaha magaalada jir Yanesen.
Akihabara - U daad gureynta caloosha bahalka dhaqanka pop.
Sanja Matsuri (三 社 祭), dhammaadka wiigga saddexaad ee Maajo. Bandhigii ugu weynaa ee Tokyo, oo lagu qabtay agagaarka Macbadka Sensoji ee Asakusa, seddexdan maalmood ee dheeriga ah wuxuu arkaa ilaa 2 milyan oo qof inay isu soo baxaan si ay u daawadaan bandhigga meelihii la qaadan karo (mikoshi) oo leh muusig toos ah, qoob ka ciyaarka iyo bandhigyada geisha.
Sumidagawa Fireworks Festival (隅田川 花火 大会 Sumidagawa Hanabi Taikai), Sabtida afaraad ee bisha Luulyo. Tartan ballaadhan oo rashka ah oo u muuqda ilaa milyan qof ayaa taagan hareeraha wabiga Sumida.
Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta ee Tokyo
Lifaaqa Katsutaro Ryokan Tokyo
Farshaxanka Ohmori Hotel Tokyo
Hoteelka Avanshell Akasaka Tokyo
Hoteelka Candeo Ueno-Park Tokyo
Huteelka Cerulean Tower Tokyu
Dai-Ichi Hotel Lifaaqa Tokyo
Afarta xilli ee Tokyo At Marunouchi
Hoteelka Garden Palace Tokyo
Grand Prince Hotel Cusub Takanawa Tokyo
Hoteelka Hilton Tokyo Bay
Hotel Aasiya Xarunta Japan Tokyo
Hoteelka Com's Ginza Tokyo
Hoteelka Qaaradaha Fuchu Tokyo
Hotel Dormy Inn Suidobashi Tokyo
Hoteelka Dormy Inn Tokyo Hatchobori
Hoteelka Hore Inn Kamata Tokyo
Hoteelka Grand Fresa Akasaka
Hoteelka Ibis Roppongi Tokyo
Hoteelka Magaala-weynta Edmont Tokyo
Hoteelka Metropolitan Marunouchi Tokyo
Hoteelka Metropolitan Tokyo
Hoteelka Monterey Ginza Tokyo
Hoteelka MyStays Maihama Tokyo Bay
Hoteelka Nikko Tokyo
Hoteelka Niwa Tokyo
Huteelka Pulitzer Jiyugaoka Tokyo
Hoteelka Rembrandt Nishikasai Tokyo
Hoteelka Unizo Shibuya
Hoteelka Villa Fontaine Hamamatsucho Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Jimbocho Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Kayabacho Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Kudanshita Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Nihombashi Hakozaki Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Nihombashi Mitsukoshimae Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Otemachi Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Roppongi Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Shinjuku Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Shiodome Tokyo
Hoteelka Villa Fontaine Tokyo Hatchobori
Hoteelka Villa Fontaine Ueno Tokyo
Boqol Joog Tokyo Shinjuku Hotel
Hoteelka InterContinental Tokyo Bay
Kurumi Toddobaadle ah oo lagu magacaabo Tokumi
Otani Cusub Hotel Tokyo
Guryaha Shaqada ee Elite Inn Shimizuzaka Tokyo
Guryaha Shaqada ee Elite Inn Tokyo
Apartment Elite Inn Tsunashima Tokyo oo loo adeegsaday
Sunshine City Prince Hotel Aagga Ikebukuro
hudheelka b Akasaka Hotel Tokyo
ah b ochanomizu Hotel Tokyo
huteelka b roppongi Tokyo
Huteelka Capitol ee Tokyu
Hotelka Prince Park Tower Hotel Tokyo
Hoteelka Prince Sakura Tower Tokyo
Xadhigga InterContinental Tokyo
Hoteelka Tokyo Station
Hoteelka Tokyo Bay Ariake Washington
Toddobaadle hudheel hurdo Meguro Aobadai
Guryaha Toddobaadlaha ah ee Ekoda Tokyo
Guryaha Toddobaadlaha ah ee Fukagawa Tokyo
Ballaarinta Toddobaadlaha Higashi-jujo Tokyo
Ballaarinta Toddobaadlaha Iidabashi Tokyo
Nakanobu Tokyo Toddobaadle ah
Dhismaha Toddobaadlaha Shinagawa Tokyo
Ballaarinta Toddobaadlaha Sugamo Tokyo
Kuwa xiisaha lihi waxay baran karaan dhaqanka soo jireenka ah sida xaflada shaaha, aana, ama fanka legdinta sida Karate, Judo, Aikido iyo Kendo. Waxa kale oo jira dugsiyo luqadeed oo badan oo kaa caawinaya inaad ku shaqeyso afkaaga Jabbaaniga ah. Dhowr jaamacadood oo ku yaal Tokyo waxay u adeegaan ardayda caalamiga ah ee heerka koowaad ama heerka qalin-jabinta.
Jaamacadda Keio (慶 應 義 塾 大学 Keiō Gijuku Daigaku) - Jaamacada gaarka loo leeyahay ee ugu sareysa Japan (ilaa aad waydiiso arday Waseda ah). Waxaa la aasaasay maalmihii samurai ee waagii hore wuxuuna leeyahay waxqabad ka adag kan Waseda, oo ay la socdaan ardaydii hore oo uu ku jiro ra'iisul wasaarihii hore Junichiro Koizumi. Xarunta weyn ee Mita.
Jaamacadda Sophia (上智 大学 Jōchi Daigaku) - Jaamacad caan ah oo caan ah, jaamacad Jesuit ah oo caan ku ah manaahijta luuqada qalaad iyo ardayda ajaanibta ah ee tirada badan. Xarunta weyn ee Yotsuya.
Tokyo Institute of Technology (東京 工業 大学 Tōkyō Kōgyo Daigaku) - Tokyo jaamacada ugu sareysa ee farsamada. Xarunta weyn ee Ookayama.
Jaamacadda Tokyo (東京 大学 Tōkyō Daigaku) - Jaamacadda koowaad ee aan la tartami karin ee dalka Japan, gaar ahaan ku adag sharciga, caafimaadka iyo suugaanta. Dadka maxalliga ah, ka gudubka imtixaannada gelitaanka waa mid si adag u adag, laakiin ardayda isweydaarsiga si fudud ayey ku geli karaan. Shan xarumood ayaa ku kala firirsan magaalada, laakiin xerada weyn waxay ku taal Hongo.
Jaamacadda Waseda (早 稲 田 大学 Waseda Daigaku) - Jaamacada gaarka loo leeyahay ee ugu sareysa Japan (illaa aad weydiisato arday Keio ah), oo caan ku ah hoyga fanaaniinta iyo partiers. Raiisel wasaarihi hore Yasuo Fukuda waa alum. Xarunta weyn ee Waseda.
Barista Ingiriisiga (ama si yar, luqadaha kale ee ajnabiga ah) ayaa wali ah habka ugu fudud ee looga shaqeyn karo Tokyo, laakiin magaaladu waxay kaloo bixisaa xulashooyin shaqo oo ka badan meelaha kale ee dalka: wax walba laga bilaabo shaqada maqaayada ilaa IT. Jinsiyadaha qaarkood waxay xaq u leeyihiin fiisooyinka fasaxa shaqada: kuwa kale, rukhsadaha shaqada way adkaan kartaa in la yimaado iyada oo aan shaqo laga helin shirkad Japan ah. La tasho qunsuliyadda / safaaradda Japan ee kuugu dhow sida ugu macquulsan.
Tokyo waa mid ka mid ah xarumaha moodada iyo qurxinta ee dunida Bariga. Waxyaabaha la raadinayo waxaa ka mid ah qalabka elektiroonigga, moodooyinka xiisaha leh, qalabka guryaha ee qadiimiga ah iyo kimono, iyo sidoo kale waxyaabaha qaaska ah sida alaabada Hello Kitty, anime iyo majaajillada iyo waxyaabaha la xiriira. Tokyo waxay leedahay qaar ka mid ah warshadaha elektarooniga ah ee adduunka ugu waaweyn, sida Sony, Panasonic, iyo Toshiba iwm.
Bixinta lacagta caddaanka ahi waa wax iska caadi ah. Inta badan ATM-yada Japan ayaa sameeya ma aqbalaan kaararka ajnabiga ah, laakiin xafiiska boostada, 7-Eleven iyo kuwa ka socda bangiyada waaweyn ayaa leh oo badiyaa leh liisaska Ingiriisiga sidoo kale (Mitsubishi-UFJ ATMs waxay aqbalaan isticmaalayaasha UnionPay iyo Discover, halka Mitsui-Sumitomo ay u oggolaatay isticmaalka kaararka UnionPay ¥ 75 lacag dheeri ah iyadoo aan loo eegin waqtiga maalinta). Inta badan ATM-yada waxay bixiyaan oo keliya notes 10,000 oo qoraal ah (sida 711 iyo dukaamada ku habboon). Si kastaba ha noqotee, ATM-yada qaar waxay bixiyaan notes 1,000 qoraal (garoonka diyaaradaha iyo bangiyada waaweyn). In kastoo kaararka deynta aad iyo aad ayaa loo aqbalaa, aad ayey uga yar yihiin marka loo eego inta badan wadamada kale ee horumaray. Heerka dembigu aad ayuu u hooseeyaa, markaa ha ka baqin inaad ku wadato lacag kaash ah sida reer Jabaan. Celcelis ahaan muwaadin u dhashay Japan ayaa ku qaadi doona kharash bil ah iyaga (qiyaastii ¥ 40,000 ayaa la siiyaa ama la qaataa). Eeg iibso under Japan. loogu talagalay digniinta guud ee ku saabsan korantada iyo iswaafajinta warbaahinta.
Waxaa jira dukaamo badan oo ku habboon Tokyo oo dhan (sida Toddoba iyo kow iyo toban, Sharciyada, iyo Qoyska-Mart), kuwaas oo furan saacad kasta oo iibiya ma aha oo kaliya cuntada iyo joornaalada, laakiin sidoo kale baahiyaha maalinlaha ah sida dharka hoose iyo musqusha. Dukaammada waaweyn ayaa sida caadiga ah furan illaa 22:00, halka dukaamada dawooyinka iyo dukaamada waaweyn ay badanaa xirmaan 21:00.
Anime iyo manga
Akihabara, Magaalada Korantada ee Tokyo, hadda waa sidoo kale xarunta aan la weydiin otaku bulshada, iyo dukaamada ku teedsan Chuo-dori waxay kuxiran yihiin sagxadaha leh anime (animation) iyo Manga (majaajillo) Degmo kale oo caan ku ah dhammaan waxyaalaha manga / anime waa qaybta Nakano iyo taakuladeeda Broadway Shopping. Kafiiri dukaanka mandarake xamuul badan oo mangas ah oo la isticmaalay iyo naadir.
Waxaa jiray “otaku boom” Akihabara. Feejignaan badan ayaa si gaar ah loo siiyay magaalada iyada oo ay ugu wacan tahay riwaayad caan ah oo reer Jabaan ah “Densha Otoko”, sheeko jacayl (run ah) oo ku saabsan otaku oo haweeney ka badbaadisa sheybaare tareenka iyo xiriirkoodii xigay.
Akihabara waxaa horay loogu yaqaanay waxqabadyo badan oo toos ah iyo cosplayers, qaar ka mid ah kuwaas oo soo jiitay feejignaan aan fiicnayn sababo la xiriira kuwa waxqabadka sameeya. Kuwani waxay noqdeen kuwo sii yaraanaya markay soo socdaan Xasuuqii Akihabara Sannadkii 2008, in kasta oo weli ay jiraan gabdho labbisan dharka dumarka oo wali la arkaayo iyagoo taagan hareeraha waddooyinka iyagoo u qaybinaaya badeecadaha xayeysiinta Kafateeriyada Gabdhaha.
Uruuriyayaasha halista ah waa inay aadaan dhanka Suuqa qadiimiga ah gudaha Ginza ama kan Suuqa qadiimiga ah gudaha Omotesando, in kasta oo magacyada rustic ay yihiin uruurinta dukaamo yar yar oo takhasus gaar ah leh (samurai armor, ukiyo-e daabacadaha, iwm.) Qiimaha madax-wareegaya. Dadka dhimanaya ayaa ku dhiiranaan kara Nishi-Ogikubo, halkaas oo aad ka soo qaadan karto duubabka naqshadeynta iyo sida dhowr kun oo yen.
The Bandhig faneed (全国 古 民 具 骨董 祭 り) waxaa lagu qabtaa dhamaadka usbuuca qiyaastii 5-6 jeer sanadkii Tokyo Ryutsu Center, khadka Tokyo Monorail, waana mid mudan in la booqdo.
Jinbocho waa in loo isticmaalo buugaagta waxa Akihabara u yahay korantada. Waxay kuxirantahay joogsiga tareenka dhulka hoostiisa mara ee Jinbocho. Baqbaqa Buluugga ahi waa dukaan kale oo ku yaal Takadanobaba oo ku yaal khadka Yamanote, oo kaliya laba joogsi woqooyi ka xiga Shinjuku.
Kaamirooyinka iyo korantada
Tan iyo markii Sony iyo Nikon ay isku mid noqdeen tayada tiknoolajiyadda sare, Tokyo waxay noqotay meel loogu jecel yahay iibsiga elektarooniga iyo kamaradaha. In kasta oo khadadka cakiran tan iyo kacaankii PC-ga, mid kastaa wuxuu leeyahay dhul-dhaqameedkiisii ​​iyo dukaamadiisii: Akihabara waxay leedahay dukaamo elektaroonig ah, oo ay ku jiraan dukaamo badan oo bilaa cashuur ah oo ku takhasusay moodooyinka dhoofinta, Shinjuku ayaa leh dukaamada kamaradaha. Nasiib darrose, qalabka elektaroonigga ah ee maxalliga ahi ma ahan mid raqiis ah, laakiin moodooyinka dhoofinta waxay la mid yihiin waxaad guriga ku bixin doontid waxaad mararka qaar heli kartaa moodello maxalli ah oo raqiis ah haddii aad iska ilaaliso dukaamada waaweyn oo aad iska hubiso dukaamada yaryar. Sidoo kale way layaab badan tahay in la helo waxyaabo qaarkood tusaale ahaan mashiinada ciyaaraha.
Shibuya iyo Harajuku oo deris la ah ayaa ah meelaha ugu caansan ee laga dukaameysto ee loogu talagalay madadaalo, dhar dhalinyaro iyo agabyo. Ku dhowaad iyada oo aan laga reebin, dharka ayaa loo qiyaasaa qaab dhismeedka Jaban.
Dukaamada waaxda iyo dukaamada gaarka loo leeyahay waxay keydiyaan astaan ​​kasta oo moodle ah oo la malaysan karo, laakiin sumadaha adduunka qiimaha Tokyo caadi ahaan way ka sarreeyaan meel kasta oo kale oo adduunka ah. Ginza-kii caanka ahaa iyo kii weynaa ee Ikebukuro Seibu iyo Tobu dukaamada waawayn (kuwa ugu waaweyn adduunka) waa goobo ugaarsi fiican. Roppongi Hills ayaa u soo ifbaxay aag caan ah oo laga dukaameysto, oo leh astaamo badan oo caalami ah. Dukaamada kale ee waaweyn ee Tokyo waa Mitsukoshi, Sogo, Marui (OIOI), Matsuzakaya, Isetan, Matsuya iyo Takashimaya. Mitsukoshi waa Japansilsiladda dukaanka waaxda ugu weyn. Bakhaarkeeda barroosinka waxay ku taal Nihonbashi. Marui Ragga bakhaarka ku yaal Tokyo / Shinjuku wuxuu leeyahay sideed dabaq oo heer sare ah oo loogu talagalay ragga oo keliya.
Degmadda tan ayaa ah Wadada Kappabashi agagaarka Asakusa, sidoo kale loo yaqaan "Magaalada Jikada." Wadada waxaa ku yaal dukaamo iibiya dhammaan noocyada alaabta jikada - waa halka ay makhaayadaha Tokyo ka helaan sahaydooda. Sidoo kale waa meel fiican in laga helo dhoobada jaban ee jaban, ha ku xusin cuntada caagga ah!
Ochanomizu wuxuu u yahay gitaarka waxa Jinbocho uu u adeegsanayo buugaagta. Halkaas, waxaad ka heli doontaa waxa ay tahay inay noqdaan ururinta ugu badan adduunka ee dukaamada gitaarka. Qalab fara badan oo muusiko ah (inkasta oo aysan ahayn kuwa dhaqanka u ah Jabbaan) ayaa sidoo kale la heli karaa.
Loogu talagalay dalxiisyaasha jilicsan ee reer Japan, meelaha ugu wanaagsan ee laga adeegto ayaa ah Nakamise ee Asakusa iyo Orizaar Bazaar gudaha Omotesando, kaas oo kaydiya dhammaan waxyaalaha jilicsan sida Kanjifunaanado shaashadaysan, kimonos cabbirkoodu yahay ajnabi, dharka loo yaqaan 'ninja' oo loogu talagalay carruurta iyo seefaha ersatz samurai oo si la yaab leh u adkaan kara in meelo kale laga helo Labaduba sidoo kale waxay leeyihiin xulasho qadiim ah oo qadiimi ah oo loo yaqaan 'connoisseur', laakiin sidoo kale eeg Antiques kor.
Baqashooyinka hawo furan ee qaabka Aasiya ayaa dhif ku ah Tokyo, marka laga reebo kuwa Ueno Ameyoko, dhaxal ka mid ah qabsashadii dagaalka kadib. Yanaka Ginza gudaha degmada Shitamachi Taito, tusaale aad u wanaagsan oo ah dariiqa laga dukaameysto ee xaafadda, ayaa sameeya fiidkii xiisaha leh.
Badanaa waxaa jira boodhadh yar iyo suuqyo qadiim ah oo shaqeynaya dhamaadka usbuuca dhammaadyo waaweyn (iyo kuwo yaryar) oo ku yaal gudaha iyo hareeraha Tokyo.
Ammaan ku joog Tokyo
Tokyo waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ugu nabdoon ee aad waligaa booqan doontid, iyo Japan guud ahaan waa mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon ee adduunka lagu booqdo. Dadka intiisa badan, oo ay ku jiraan dumarka safarka ah ee dumarka kelida ah, ma la kulmi doonaan wax dhibaato ah keli socodka hareeraha waddooyinka habeenkii. Dembiyada waddooyinka aad iyo aad ayey dhif u yihiin, xitaa xilli dambe oo habeenkii ah, waana sii yaraanayaan. Si kastaba ha noqotee, "Dambi yar" macnaheedu maaha "dambi maleh", iyo caqliga saliimka ah waa in lagu dabaqaa sida aduunka oo dhan. Badanaa halista ugu badan waa socdaalayaasha qaadanaya Japan'Dambi la'aanta muuqata oo aad ugu dhow wadnaha iyo sameynta waxyaabo aysan waligood ku sameyn doonin guriga.
Dembiyada ugu caansan waa dhibaateynta galmada ee tareennada ciriiriga ah, midba midka kale la isku riixo, gacmuhu way kala wareegaan. Tani waxay ka sii badan tahay dhibaatada deegaanka maadaama reer galbeedka loo arko kuwo dagaal badan oo iyagu naftooda ku adkeysan doona. Sida ugu wanaagsan ee loola tacaali karo gacmo warwareegaya waa inaad ku dhawaaqdaaChikan!”Oo ah erayga Jabaan ee“ qallooc ”.
Saldhigyada booliska ee yar yar, ama kaban (交 番), waxaa laga heli karaa dhowr baloog kasta. Haddii aad lumiso ama aad u baahato gargaar, si kasta ugu tag iyaga; waa shaqadooda inay ku caawiyaan! Waxay leeyihiin khariidado waaweyn oo agagaaraha ah, waxayna ku faraxsan yihiin inay tilmaamo bixiyaan. Hase yeeshe, waxaa laga yaabaa inay dhibaatooyin kala kulmaan Ingiriisiga, sidaa darteed aqoonta qaarkood ee luqadda Jabbaan ayaa kaa caawinaysa.
Qaad taxaddarrada caadiga ah ee ka dhanka ah jeeb-jeexyada meelaha dadku ku badan yahay iyo tareennada. Sidoo kale, xatooyada waxay u badan tahay inay ka dhacdo meelaha lagu caweeyo iyo baararka ay caanka ku yihiin socotada iyo dadka aan deegaanka ahayn
Degmooyinka iftiinka cas iyo nolosha habeenkii waxay noqon karaan wax yar oo miro dhal ah, laakiin marar dhif ah ayay khatar yihiin. Qaar ka mid ah xarumaha yar yar ee cabbitaanka waddooyinka ee degmooyinka iftiinka cas ayaa lagu yaqaan inay ka qaadaan qiimaha baadda. Dhibaatooyin isku mid ah ayaa ka jira naadiyada heerka sare ee Roppongi, halkaas oo laga yaabo inay caqli gal tahay in la hubiyo khidmadaha caymiska iyo cabitaanka qiimaha hore.
Bishii Sebtember 2014, a dengue cudur faafa ayaa ku faafay dhowr boqol oo qof Tokyo, wuxuuna u horseeday maamulka inay xiraan dhowr jardiinooyin oo ku yaal degmada Tokyo / Shinjuku.
Wali ku jira jam? Wac Khadka Tooska ah ee Tokyo English, tel. 03-5774-0992, maalin kasta 09: 00-23: 00.
Haddii aad ka dhigtid illaa jasiiradaha Izu, dadka soo booqda jasiiradda Miyakejima waxaa looga baahan yahay inay qaataan maaskaro gaas, sababo la xiriira gaasaska fulkaanaha. Kuwa caafimaad ahaan liita waxaa lagula talinayaa inay u safraan jasiiradda. Intaa waxaa dheer, Tokyo, sida inta kale Japan wuxuu halis ugu jiraa dhulgariir.
Hotel Sunroute Nagano Xalaal Ma Saxeexan Yahay Mise Muslim Saaxiibbaa?
Hoteel Jal City Nagasaki Ma Xalaalbaa Mise Muslim Saaxiibbaa?
Ma Rose Hotel Yokohama waa Xalaal ama Huteel Saaxiibtinimo oo Muslim ku yaal Yokohama
eHalal Safarka Mart > News Latest > Japan > Tilmaamaha Socdaalka Xalaal ee Tokyo Olympics
Royal Plaza oo ku taal Scotts	    
Qolalka oo dhami waxay la yimaadaan Quraan, calaamadaha Kiblat iyo musqul suunka gacanta lagu sito. Waqtiyada salaada iyo dardaaranka salaada ayaa la heli karaa (kaliya weydii).
Safarka Brunei Xalaal
Saldanada Brunei waa mid yar laakiin - mahadi ha u ahaato gaaska dabiiciga iyo khayraadka batroolka - wadan aad u hodan ku ah Koonfur-bari Aasiya.